ICanLocalize: Were Agharia Sụgharịa Azụmaahịa Gị Iji Ruo Ndị Ọhụrụ | Martech Zone
Ndị ọrụ m na-enyere ndị ụlọ ọrụ ahụike na-asụ asụsụ abụọ aka ka ha wulite saịtị ha, bulie ya maka ọchụchọ, yana mepee ndị ahịa ha nkwukọrịta ahịa. Ọ bụ ezie na ha nwere ọmarịcha saịtị WordPress, ndị wuru ya dabere na ya ntụgharị asụsụ igwe maka ndị ọbịa na-asụ Spanish. Enwere nsogbu atọ na nsụgharị igwe nke saịtị ahụ, n'agbanyeghị:
Ibe - Ntụgharị asụsụ igwe Spanish echeghị echiche na Mexico olumba nke ndị ọbịa ya.
Usoro ihe omuma - Ntụgharị asụsụ igwe enweghị ike ịnabata usoro ọgwụgwọ akọwapụtara ngwa ngwa.
Alitykpụrụ iji mezuo iwu - Ntugharị ahụ, ọ bụ ezie na ọ dị mma, abụghị mkparịta ụka n'ụdị… dị mkpa mgbe ị na-agwa ndị ahịa a lekwasịrị anya okwu.
Iji nwee ike ịnabata mmadụ atọ ahụ, anyị gafere ọrụ ntụgharị igwe wee were ọrụ ntụgharị maka saịtị ahụ.
Ọrụ WPML WordPress WPML
na Ngwa WPML nwere ọtụtụ asụsụ na nnukwu WordPress isiokwu (Salient) nke na-akwado ya, anyị nwere ike ịmepụta ma bipụta saịtị ahụ ngwa ngwa wee tinye WPML Ọrụ Ntugharị iji sụgharịa saịtị ahụ n'ụzọ zuru ezu site na iji Kpọọ nke ICan njikọ ọrụ ntụgharị asụsụ.
Ọrụ ICanLocalize Integrated Translation
Chọọnụ awade ihe integrated ọrụ na ngwa ngwa, ọkachamara, na ọnụ. Ha na-enye ihe karịrị puku abụọ asụgharịrị asambodo, ndị nsụgharị na-asụgharị ihe karịrị asụsụ iri anọ na ise. Ọnụego ha dị nnọọ ala karịa ụlọ ọrụ ọdịnala na-anabata nnukwu azụmaahịa ma ọ bụ chọọ ụdị ntọala akaụntụ aka ọ bụla.
Iji WPML Translation Dashboard ejikọtara na ICanLocalize, ị nwere ike ịhọrọ ihe maka ntụgharị ma gbakwunye ha na nkata ntụgharị. A na-agụta ọnụ ọgụgụ na ọnụahịa na-akpaghị aka ma tinye ya na kaadị akwụmụgwọ gị na akaụntụ ICanLocalize gị. Ntugharị na-kwụ n'ahịrị na-akpaghị aka na-ebipụta n'ime gị na saịtị.
Ewezuga saịtị WordPress nke ejiri WPML rụọ, ICanLocalize nwekwara ike ịsụgharị dọkụmentị ọfịs, faịlụ PDF, sọftụwia, ngwa mkpanaka, yana ederede dị mkpirikpi.
Banye maka ICanLocalize
Ngosipụta: Ana m eji njikọ njikọ m maka Chọọnụ.
Tags: ọnụ ọnụ nsụgharịgbasaaIntegrated translationtranslationọrụ ntụgharị asụsụwordpress multi-asụsụwordpress pluginntụgharị wordpressọrụ ntụgharị asụsụ wordpresswpml